China High Quality DC07 DC06 China Steel Coil Low Carbon Cold Rolled Steel Coil DC01 fekitari nevagadziri |Zhanzhi
Cold rolled simbi coil inokungurutswa yakananga mune imwe ukobvu nema roller pane yakajairika tembiricha uye yakakungurutswa kuita coil yese newinder.Kana ichienzaniswa neinopisa yakamoneredzwa coil, inotonhora yakakungurutswa coil ine inopenya pamusoro uye yakakwirira kutsvedzerera, asi inoburitsa yakawedzera kushushikana kwemukati, saka inowanzovharwa mushure mekutonhora.
Chokwadi inzira huru yekuvandudza zvinhu zvedu zvekutengesa uye kugadzirisa.Basa redu rinofanira kunge riri rekugadzira zvigadzirwa zvekufungidzira kune tarisiro ine ruzivo rwakanakisa rwePamusoro Hunhu China Simbi Coil Yakaderera Carbon Inotonhora Yakakungurutswa Simbi Coil DC01, Tiri kutarisira nemoyo wose kushanda pamwe nevatengi pasi rese.Tinotenda kuti tinogona kukugutsa.Isuwo tinogamuchira noushamwari vatengi kushanyira kambani yedu uye kutenga zvigadzirwa zvedu.
Chokwadi inzira huru yekuvandudza zvinhu zvedu zvekutengesa uye kugadzirisa.Basa redu rinofanira kunge riri rekugadzira zvigadzirwa zvekufungidzira kune tarisiro ine ruzivo rwakanyanya rweChina CR Steel Coil, Steel Coil, Tiri kutsvaga mikana yekusangana neshamwari dzese kubva kumba nekune dzimwe nyika kuitira kukunda-kuhwina kubatana.Tinovimba nemoyo wese kuva nekubatana kwenguva refu nemi mose pazvigadziko zvekubatsirana pamwe nebudiriro yakafanana.
4.Kukora: 0.4mm, 1mm, 1.5mm, nezvimwewo.
5.Coil ID: 508mm/610mm kana sezvinodiwa nemutengi
6.Coil uremu: kubva ku6-15MT, maererano nechikumbiro chemutengi
7.Surface treatment: Chemical passivating, mafuta, passivating + mafuta
8.Packing: yakajairika gungwa-yakakodzera kurongedza
9.Kushandisa: Furniture pombi kugadzira
Hunhu hwekutengesa hwakakodzera kubhenda kugadzirwa uye nyore
forming;iyi ndiyo mhando iri kudiwa zvakanyanya.
Motokari pasi nedenga
Kudhirowa mhando yechipiri chete iyo yeSPCEN.Excellent uniform.
Mafenda emota uye
Hunhu hwakadzama.Iine metallurgically inodzorwa saizi yezviyo, inochengeta kupera kwayo kwakanaka kunyangwe mushure mekudhonzwa kwakadzika.
Hapana kupisa kunoitwa mukugadzirwa kwekugadzira, saka hapana kukanganisa kwakadai segomba uye chiyero chinowanzoitika mukupisa kunopisa, uye kunaka kwepamusoro kwakanaka uye kutsetseka kwakakwira.Zvakare, iyo dimension chaiyo yezvinotonhora-yakatenderedzwa zvigadzirwa yakakwira, uye zvivakwa uye microstructure yezvigadzirwa zvinogona kusangana nezvimwe zvakakosha zvekushandisa, senge electromagnetic zvivakwa uye yakadzika yekudhirowa zvivakwa.
Yakaderera kabhoni simbi inonyanya kushandiswa, iyo inoda yakanaka kutonhora kukotama uye kuita welding, pamwe nekumwe kuita kwekutsika.
Cold rolled steel coils anoshandiswa zvakanyanya, senge kugadzira mota, zvigadzirwa zvemagetsi, rolling stock, ndege, midziyo chaiyo, chikafu chemumagaba uye zvichingodaro.
DC01, DC02, DC03, DC04, DC06, DC07, SPCC, SPCD, SPCE mamakisi anowanzo shandiswa kune zvikamu zvinoumbwa nekudhirowa kwakadzika nemapanga ekugadzira. Chokwadi inzira huru yekuvandudza zvinhu zvedu uye kugadzirisa.Basa redu rinofanira kunge riri rekugadzira zvigadzirwa zvekufungidzira kune tarisiro ine ruzivo rwakanakisa rwePamusoro Hunhu China Simbi Coil Yakaderera Carbon Inotonhora Yakakungurutswa Simbi Coil DC01, Tiri kutarisira nemoyo wose kushanda pamwe nevatengi pasi rese.Tinotenda kuti tinogona kukugutsa.Isuwo tinogamuchira noushamwari vatengi kushanyira kambani yedu uye kutenga zvigadzirwa zvedu.
Yemhando yepamusoro China CR Simbi Coil, Simbi Coil, Tiri kutsvaga mikana yekusangana neshamwari dzese kubva kumba nekune dzimwe nyika kuitira kuhwina-kuhwina kubatana.Tinovimba nemoyo wese kuva nekubatana kwenguva refu nemi mose pazvigadziko zvekubatsirana pamwe nebudiriro yakafanana.